နိုင်ငံတ၀န်း ရေလွှမ်းမှု အန္တရာယ် ကြုံနိုင်သည့် ဒေသများ တိုးလာရန်ရှိ
ကျော်ခ| July 30, 2013
ယမန်နေ့က ရေနစ်မြုပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မြ၀တီမြို့ (ဓာတ်ပုံ – ပြည်တော်မြင့် / ဧရာဝတီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှု အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ နိုင်သည့် ဒေသများ တိုးလာမည်ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင်များက ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကယား ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင် ပြည် နယ် က နေရာတချို့တွင် ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့မှစပြီး မိုးရွာသွန်းခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တို့တွင် ရေလွှမ်းမှုဖြင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ မိုးရွာသွန်းနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျန်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသတချို့တွင်ပါ ရေလွှမ်းမှု အန္တရာယ်နှင့် ဆက် လက် ကြုံနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်သည် မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ယခင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး မိုးလေဝသ အခြေ အနေ များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍ ၎င်း၏ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် လူမှုကွန်ရက် Facebook တို့မှတဆင့် ထုတ်ပြန်ပေး လျက် ရှိသည်။
ယခုလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထိုမှတဆင့် မုတ်သုံလေ အားကောင်းမှုဖြစ် လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း တချို့တွင် မိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချစ်ကျော် ကလည်း ပြောသည်။
ယခုအခါ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်း၌ ၅ ကြိမ်မြောက် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေတခုအား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွေ့မြင်နေရကြောင်း အဆိုပါ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အားကောင်းလာပါက မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း မိုးပိုမို ရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရေလွှမ်းမှု ပိုလာနိုင်ကြောင်း ဦးချစ်ကျော်က ဆက်ပြောသည်။
သူက “ဒီလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းလေး ဖြစ်မယ့် တိမ်တိုက်ဟာ မဖြစ်ဘဲနဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ မိုးရွာချပြီး ပျက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အခုမိုးရွာနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ နောက် ၁ ရက် ၂ ရက်ဆိုရင်လျော့သွားပြီ၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဘေးအန္တရာယ်က မြန်မြန်လွတ်မြောက် သွားမှာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန ၏ ယနေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ ပိုမိုအားကောင်းလားကြောင်း နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်၌ တွေ့ရှိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန၏ ယနေ့အထိ ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း အောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တနာရီလျှင် မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းပြီး ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားရာ နေရာများတွင် မြေပြိုမှု၊ မြစ်ရေလျှံမှု၊ လမ်းများပြိုကျ ပျက်စီးမှု၊ လယ်ကွင်းများ ရေမြှုပ်မှုနှင့် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံနေရမှုတို့ ရှိနေကြောင်း၊ ယမန်နေ့က တိုင်းထွာချက်အရ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်မြို့နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တို့တွင် မိုးရေချိန် စံချိန်သစ် တင်သည်အထိ ရွာသွန်းခဲ့ပြီး ရေလွှမ်းခဲ့ကြောင်း ဦးချစ်ကျော် ကပြောပြသည်။
နိုင်ငံအတွင်း မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၊ ရုပ်သံများနှင့် ရေဒီယိုများမှတဆင့် ယခုလဆန်းပိုင်း ကတည်းက မကြာ ခဏ အသိပေး ကြေညာထားသကဲ့သို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းဌာနများနှင့်လည်း မိုးလေဝသ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း ယနေ့အထိ ရေကြီးမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှု မရှိသေးကြောင်း အစိုးရ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန က ပြောသည်။
ထို့အတူ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန ၏ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း ရာသီဥတု နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဧရာဝတီ၊ ဒုဋ္ဌဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်း၊ ရွှေကျင်၊ သံလွင်၊ ပဲခူးနှင့် ငဝန်မြစ် များ၏ ရေကြီးနိုင်မှုအခြေအနေများ ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြို့များ၊ ကျေးရွာများနှင့် လမ်းများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှုအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ တာချီလိတ်မြို့နှင့် မြဝတီမြို့များတွင်လည်း ရေလွှမ်းမှု ဒဏ်ကိုခံနေရပြီး ဈေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် ကျောင်းများကို သွားလာရန် အခက်ကြုံနေကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့် မြဝတီမြို့တို့တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ထောင်နှင့်ချီသော ရေဘေးဒုက္ခသည်များ ရေဘေးလွတ် ရာသို့ သွားရောက်ခိုလှုံ နေကြရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား အများစု အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့တွင်လည်း ရေကြီးမှုကြောင့် စက်ရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အခက်ကြုံနေရကြောင်းလည်း သိရသည်။
၂၈.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၃၁၅ အချိန်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်
အထူးမှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုများဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ဖူးသူ သိန်းဇော်ဦး(ခ)ကတုံး၊ (ဘ)ဦးသိန်းဝင်း၊ ထမလုံကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်နေသူအား ZHINENG-125 အမျိုးအစား အပြာအနက်စက်ကြားဆိုင်ကယ်
(၁)စီးနှင့်အတူ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဈေးအတွင်း၌ မသင်္ကာတွေ့ရှိစစ်ဆေးရာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား
တစ်စုံတစ်ရာပြသနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၅၂၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၇၉/၅၄ ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်
ဖြစ်ပွားသည့် ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ကထိကလေးဦးက ရွာသားငါးဦးကို အမှုဖွင့်
၀ိုင်းအောင် | အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၅ မိနစ်
မကွေးမြို့နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကထိကလေးဦးက ရွာသားငါးဦးသည် ၎င်းတို့ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာပြီး ထိုးကြိတ်သည်ဟု စွပ်စွဲကာမကွေးနယ်မြေ ရဲစခန်း၌ ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နေ့လည်က လာရောက်တိုင်ကြားသဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု ထိုရဲစခန်းက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယခုကိစ္စကို တိုင်ကြားသည့် ကထိကလေးဦးမှာ ဦးအောင်ကိုကိုကျော်၊ ဦးဟန်ထွန်းအောင်၊ ဦးအောင်ဇင်မြင့်နှင့် ဦးအေးငြိမ်းအောင်တို့ဖြစ်သည်ဟု ရဲစခန်းကအတည်ပြုထားသည်။
ကထိကလေးဦးသည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က ဂိမ်းဆိုင်မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ ပြန်လာကြစဉ် ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခု အနီးအရောက်တွင် လမ်းမပေါ်တွင် ဂစ်တာနှင့် ဘီယာပုလင်းများကို ဆောင်လာကြသော ကျောင်းအနီးရှိ ကန်ပြားအရှေ့ရွာမှ ရွာသားငါးဦးနှင့် ဆုံခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ရွာသားများက ကထိကများကို "What is your name"ဟု အော်ဟစ်မေးမြန်းကြောင်း၊ ထို့ကြောင် ကထိကများက “မင်းတို့ ကျောင်းသားတွေလား” ဟု ပြန်မေးမိစဉ် ရွာသားများက မချေမငံဆဲ ရေးတိုင်းထွာမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်းကထိကများက ရဲကို ထွက်ဆိုသည်။
ထို့နောက် ကထိကများကကျောင်းသို့ ပြန်လာစဉ် တက္ကသိုလ်အ၀အထိ ရွာသားများကနောက်မှ လိုက်လာပြီး ဆဲရေးတိုင်းထွာကာ ကထိကတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ကိုကိုကျော်၏ နောက်ကျောကို ဘီယာပုလင်းဖြင့် ပစ်ပေါက်သည်ဟုလည်း ကာယကံရှင်က ရဲကိုတိုင်တန်းထားသည်။
ထို့ပြင် အခြားကထိကတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဟန်ထွန်းအောင်ကိုလည်း ရွာသားများက လက်သီးများဖြင့် ချိန်ရွယ်ကာ “သတ်ပစ်ရင်တော့ မင်းတို့သေတော့မယ်”ဟု နှုတ်မှပြောကြောင်းလည်း သူတို့ကရဲဌာနတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကထိကများက အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ကိုအောင်စိုးမိုး၊ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကိုအောင်ကိုမြင့်၊ အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် ကိုအောင်လွင်၊ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုအောင်ဆန်းမိုးနှင့် အသက်၂၅ နှစ်အရွယ် ကိုရန်နောင်စိုးတို့ ငါးဦးကို ဆဲရေးမှု၊ ထိုးကြိတ်မှုတို့ဖြင့် ရဲဌာန တွင်စွပ်စွဲတိုင်ကြားထားသည်။
မကွေးနယ်မြေ ရဲစခန်းကလည်း ကထိကများ၏ တိုင်ကြားမှုကို အမှုအမှတ်(ပ)၁၄၂/ ၂၀၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စွပ်စွဲခံရသည့် ရွာသားငါးဦးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၄ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီမှု၊ ပုဒ်မ ၂၉၄ ဆဲရေးမှု၊ ပုဒ်မ ၃၂၃ နာကျင်စေမှု၊ ပုဒ်မ ၅၀၆ ရာဇ၀တ် မကင်းသောချောက်လှန့်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် ဆောင်ရွက်မည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဇူလိုင် ၂၉
Gangnam Style သီချင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှား ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား ရက်ပ်တေးသံရှင် PSY ဟာ စက်တင်ဘာလမှာ အယ်လ်ဘမ်အသစ် ထွက်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ကြောင်း kpopstarz.com မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ PSY ဟာ အယ်လ်ဘမ်အသစ်အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာ ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
PSY ဟာ ယခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Gangnam Style နဲ့ Gentleman အယ်လ်ဘမ်တို့ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းသာ ပါဝင်တဲ့ အယ်လ်ဘမ်အဖြစ် ဖြန့်ချိခဲ့ပေမယ့် အခုစက်တင်ဘာလမှာ ထွက်မယ့် အယ်လ်ဘမ် အသစ်မှာတော့ သီချင်းအများအပြား ပါဝင်နိုင်အောင် စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ PSY ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ဂီတလောကထဲကို စတင်ခြေချခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား မရခဲ့ဘဲ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး အယ်လ်ဘမ်ဟာလည်း အများပြည်သူ ကြည့်ရှုရန် မသင့်လျော်တဲ့ ပြကွက်တွေနဲ့ သီဆိုပုံတွေ ပါဝင်နေ တယ်ဆိုပြီး တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ ဒဏ်ရိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ Gangnam Style သီချင်းကို Youtube ကနေတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါကျမှ ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာက ဆုတံဆိပ်တွေ ဝိုင်းဝန်းချီးမြှင့်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
PSY ကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မေးမြန်းတဲ့ အခါမှာတော့“ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အခုအချိန်မှာ နေ့တိုင်းဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ နေထိုင်နေရသလိုပါပဲ” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိန် မီးရထား တိမ်းမှောက်မှု မောင်းသူကို လူသတ်မှုပေါင်း ၇၉ မှုဖြင့် စွဲချက်တင်
စန်တီဂို၊ ဇူလိုင် ၂၉
စပိန်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးရထား လမ်းချော် တိမ်းမှောက်မှုကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါ ရထားကို မောင်းနှင်သူအား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဆင်မခြင်မှုကြောင့် ဖြစ်သော လူသတ်မှု စုစုပေါင်း ၇၉ မှုဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်ရကြောင်း အာဏာပိုင်များ ၏ ပြောကြားချက်ကို CNN သတင်းဌာနက ရေးသား ဖော်ပြသည်။
စပိန်နိုင်ငံ စန်တီဂိုဒီကွန်ပိုစတာလာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါ ရထား လမ်းချော် တိမ်းမှောက်မှုတွင် လူပေါင်း ၇၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ရာ ယင်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးက ရထားမောင်းသူ ဖရန်စစ္စကို ဂျို့စ်ဂါဇွန်ဆိုသူအား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဆင်မခြင် လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် လူ၇၉ ဦး သေဆုံးမှုဖြင့် ယင်းသို့ စွဲချက်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် လက်ရှိ အနေအထားတွင် တရားရုံးတော်က ဖရန်စစ္စကိုအား ခြွင်းချက်ဖြင့် လွှတ်ပေးထား ကြောင်း၊ ရထားမောင်း လိုင်စင်ကို ခြောက်လ တာမျှ ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ၎င်းအနေနှင့် တရားရုံးတော်သို့ အပတ်စဉ် မဖြစ်မနေ သတင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း စပိန် တရားရေး အာဏာပိုင်များက ပြော ကြားသည်။
ရထားမောင်းသူ အနေနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေး တိမ်ရှောင်ခြင်း မပြုရန် ၎င်း၏ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကိုလည်း အာဏာပိုင်များက သိမ်းယူ ထားသည်။
ရထားမောင်းသူ ဖရန်စစ္စကိုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်ခန့်က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များ၏ စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ဆေးရုံသို့ တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းအား တရားရုံးတော်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်များ အဆိုအရ မီးရထား၏ အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သိမ်းဆည်းထား ပြီး ရထား လမ်းချော်သည့်နေရာ (ရထားလမ်း အကွေ့နေရာ) အရောက်တွင် မောင်းနှင်ခဲ့သော မြန်နှုန်းကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ် ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။
စပိန်နိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဂျော့ဖာနန်ဒက်ဇ်က ရထား လမ်းချော် တိမ်းမှောက်မှုတွင် မောင်းနှင်သူ၏ မှားယွင်းချက် ဖြစ်သည်ဟု ယုတ္တိရှိရှိ ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်များ တွေ့ရှိရကြောင်း အတည်ပြု ပြော ကြားသော်လည်း အသေးစိတ် အချက်အလက်ကိုမူ ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ရထားသည် မက်ဒရစ်မြို့မှ ဖာရိုးမြို့သို့ ခြောက်နာရီ ကြာမြင့်သည့် ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးခါနီး အချိန်တွင် ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများအနက် ၆၃ ဦးမှာ စပိန် နိုင်ငံသား များ ဖြစ်ကြပြီး တစ်ရာကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုက သတင်း ထုတ်လွှင့်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ် လပြည့်ဝန်းပလာဇာကို ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့ နေ့ခင်း ၁ နာရီဝန်းကျင်မှာ မီးသတ်သမားတွေ ရောက်သွားပါတယ်။
အသေးစား မီးလောင်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံပါပဲ။
အနီးအနားမှာ အထင်ကရ အထက်တန်းကျောင်း ဒဂုံ ၁ ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက်ချိန်လွန်သွားပေမယ့် မီးသတ်ကား အ၀င်အထွက်ကိစ္စများ နဲ့ အရေးပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် အဲဒီရှေ့မှာ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှု ကာလအတန်ကြာ ဖြစ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ မီးမတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်ပွားမှု မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်တတ်ပေမယ့်လည်း အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတွေသာ အများစု ရှိတာကြောင့် အကြီးအကျယ် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားလေ့ မရှိပါဘူး။
သမ္မတဟိုတယ်နဲ့ မနီးမဝေးမှာ တည်ရှိတဲ့ လပြည့်ဝန်းပလာဇာရှေ့ကို ဒီကနေ့ မီးသတ်ကား အများအပြား ရောက်သွားပေမယ့်လည်း ပုံမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်း အမှုက ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ခဲ့ပုံ မရပါဘူး။
ရန်ကုန် အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မီးလောင်မှုတွေဟာ လျှပ်စစ်မီး မတော်တဆမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလေ့ ရှိပါတယ်။
ရှိရာအခန်း ၌ယနေ့နေ့လည့် ၁၂၂၀အချိန် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသဖြင့်အဆိုပါနေရာသို့မီးသတ်ယာဉ်
မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ၁၂၃၀ အချိန်တွင်မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်းYangon Policeမှသိရသည်။
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေလို့ ၈၅၀ မီတာအရှည် တံတားတစင်း ခါးလည်ပိုင်း ကျိုးကျသွား (ရုပ်/သံ)
30072013TUE ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူအနီးမှာ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေလို့ မွန်လူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ ၀င်းကရွာရှိ ၈၅၀ မီတာအရှည် တံတားတစင်း ခါးလည်ပိုင်း ကျိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ မောင်တူး
ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ စုပေါင်းပီး သံဃာတော်တွေကို ၀ါဆိုသင်္ကန်းသွားရောက်လှူဒါန်း
ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ စုပေါင်းပီး ဘီးလင်းမြို့ တောင်စွန်း ဓမ္မဒူတတောရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ သီတင်းသုံးဝါဆိုတော်မူကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ၀ါဆိုသင်္ကန်းသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုသီဟ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ခြေဖနောင့် နာအောင်လုပ်တဲ့ ဒေါက်မြင့်များ သတိထား လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖဝါး မတ်တတ်ရပ် လမ်းလျှောက်ဖို့ရာ ခြေဖဝါး (ဖနောင့်မှ ခြေချောင်းလေးတွေ အထိ) နှင့် ခြေသလုံး တိုင်တို့ ၉၀ ဒီဂရီ ရှိ ရပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ခြေသပွတ် တိုင်နဲ့ ခြေဖဝါးကတော့ ၆၀ ဒီဂရီ ရှိရတယ်။ ဒါမှ လူတွေဟာ နေ့စဉ် ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါက်မြင့်တဲ့ ရှူးဖိနပ်တွေက လူရဲ့ ခြေထောက် အနေအထားကို ရှေ့မှ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အနေအထား ဒီဂရီ တွေ ပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက် သူတို့ ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေ ပါသတဲ့။
နောက်တစ်ချက် ကတော့ ခြေဖဝါးရှိ ခြေဆစ်ကလေး တွေ အားပြုလျှောက်ရလို့ ရောင်ရမ်း လာခြင်း၊ ခြေဖနောင့်အရွတ် ရောင် ရမ်းလာခြင်း၊ ခြေပူနာခေါ် အသားမာ တက်လာခြင်းနှင့် ခြေမအဆစ်ငေါပြီး နာကျင် လာခြင်းတို့ပါ တွဲဖက် ခံစား နိုင်ပါသတဲ့။ ဒေါက်မြင့်လေ ခြေသပွတ် တိုင်လယ်တာ၊ ခေါက်တာ၊ လဲကျလို့ အရိုးကျိုးတာစတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင် ပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီး တွေဟာ ဒေါက်မြင့်မြင့် ကြီးတွေစီးရင် ပိုကြည့်ကောင်းလာမှာ ပဲလို့ထင်ပြီး စီးလေ့ရှိပါတယ်။ အမှန် က ၂.၅ စင်တီမီတာထက် ပိုနိမ့်ပြီး ပိုကျယ်တဲ့ ဒေါက်မြင့်မျိုး စီးသင့်ပါ တယ်။
ဝက်ခြံအတွက် အခြားကုထုံးများ အရေပြားရှိ ဆံခြည်မျှင် အိတ်တွေမှာ အရေပြား ဆဲလ်သေ၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဆီကြည်လို့ ခေါ်တဲ့ အဆီတွေ ပိတ်ဆို့တဲ့အခါ ဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်လာတတ် ပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ ပိုးမွှားတွေက ကြာလာရင် ဝက်ခြံ အဖုအပိမ့် အပြစ်အနာအဆာတွေ ဖြစ်လာတတ် ပါတယ်။
တချို့အစား အသောက်တွေက အ ရေပြားမှာ အဆီတွေကို အလွန်အမင်း ထွက်ရှိစေတဲ့ အတွက် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အဆီထွက်ရှိမှု မြင့်မားစေတဲ့ အစားအ သောက်တွေက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (သကြား) နဲ့ ပြည့်ဝဆီပါတဲ့ အစာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတာက တချို့သူတွေမှာ ချောကလက် စားရင် ဝက်ခြံထွက်တတ်ပေမယ့် တချို့ လူတွေမှာ နွားနို့ထဲက အဆီကြောင့် ဝက်ခြံ ဖုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာနဲ့ အိုင် အိုဒင်းပါတဲ့ ဆားတွေလို အိုင်အိုဒင်းဓာတ် များတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။
အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ်၊ သစ်သီးနဲ့ ပဲအ မျိုးမျိုးကို စားတာကြောင့် အသားအရေ ကို ကျန်းမာလှပစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုထဲမှာ ဗီတာမင် ဒါမှမဟုတ် သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးမျိုး ချို့တဲ့ရင်လည်း ဖိစီးမှုကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်း လျော့နည်း ကာ ဝက်ခြံအဖုအပိမ့်တွေကို ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်နေသူ ဒါမှမဟုတ် ဝက်ခြံဖြစ်လွယ်သူတွေ အဓိက မှီဝဲသင့် တဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကတော့ ဇင့် (သွပ်) ဓာတ်၊ ဆီလီနီယမ်၊ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာ မင် B6 နဲ့ ဗီတာမင်အီးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ လေ့လာမှုအ မျိုးမျိုးအရ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်ချို့တဲ့နေသူ တွေအနေနဲ့ ဝက်ခြံနဲ့ တခြားအရေပြားအ ပြစ်အနာအဆာဖြစ်နှုန်း မြင့်မားကြောင်း တွေပရပါတယ်။ ဝက်ခြံရှိသူ လူနာတွေ အနေနဲ့ ပုံမှန် ဇင့်(သွပ်) မှီဝဲပြီး နှစ်လအကြာမှာ ဝက်ခြံနဲ့ တခြားအဖုအပိမ့်တွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ သိသိသာသာ လျော့နည်းမှု ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဇင့်(သွပ်) ဓာတ် ရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး အရေပြားဓာတ်မတည့်မှုကို လျော့ကျ စေပါတယ်။ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်များပြားတဲ့ အစားအစာတွေက အခြောက်အခြမ်း လုပ်ထားတဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဂျုံ၊ ကမာ စတာ တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆးဖက်ဝင်ကုထုံးအများစုဟာ ဝက်ခြံအဖုအပိမ့်ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီး ယားပိုးတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ ဆေး ဖက်ဝင်အပင်တွေက ကိုယ်တွင်းစနစ်ကို သန့်စင်စေတဲ့အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် ဝက်ခြံအဖုအပိမ့်တွေ မဖြစ်အောင် ကာ ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီ ( Tea Tree Oil)
လက်ဖက်ဆီ ငါးရာခိုင်နှုန်းက ထုတ်ထားတဲ့ ဂျဲလ်ဟာ ဘန်ဇွိုင်းပါအောက် ဆိုက်လိုးရှင်း ငါးရာခိုင်နှုန်းလိုပဲ ဝက်ခြံကင်း စင်စေတယ်လို့ ဩစတြေးလျသုတေသီ တွေက ဆိုပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီမှာ ဘက် တီးရီးယားသေစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပြီး အလွန်အစွမ်းထက် ပါတယ်။
ရနံ့ကုထုံး - ချမိုမိုင်း၊ လာဗန်ဒါ စတဲ့ မရှိမဖြစ်ဆီတွေကို ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ ဖျော်ပြီး စပရေးအနေနဲ့ ဖျန်းပက်ပေးတာ ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေပြီး ဝက်ခြံသက်သာစေပါတယ်။
အအေးကုထုံး - ဝက်ခြံအဖုအပိမ့်ပေါ်ကို ရေခဲကပ်တဲ့ နည်း၊ ပင်လယ်ရေ စိမ် တဲ့နည်းနဲ့ အေးမြစိုစွတ်တဲ့ ပိတ်စနဲ့ ကပ် တဲ့နည်းတွေဟာလည်း ဝက်ခြံသက်သာ စေပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်း - စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ နာ့ဗ် ကြောတင်းအားတို့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံ အဖုအပိမ့်တွေဟာ တရားထိုင်တာကြောင့် သက်သာစေပါတယ်။
ကလေးတွေ ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် အသုံးချခံနေရတာကိုFBIနှိမ်နင်း
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ကလေးတွေ ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် အတင်း အဓမ္မ ရောင်းစားခံနေရတာတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့ သူတို့အဆိုအရ အကြီးဆုံး စစ်ဆင်ရေး တခု ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုပြီး ကလေး တရာကျော်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ အက်ဖ်ဘီအိုင် FBI ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောပါတယ်။
အများအားဖြင့် မိုတယ် တည်းခိုခန်းတွေ ၊ လောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ ကုန်တင်ကား ရပ်နားရေးစခန်း တွေက ပြည့်တန်ဆာခေါင်း အယောက် ၁၅ဝ ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အက်ဖ်ဘီအိုင်က ဆိုပါတယ်။
သူတို့ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတွေ ၊ လူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ ဗဟို အစိုးရ ၊ ပြည်နယ် အစိုးရ ဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အက်ဖ်ဘီအိုင် အဖွဲ့ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ အပြောအရ ကလေးတွေကို ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ်အသုံးချမှုဟာ အမေရိကန် တလွှားက ကလေးတွေကို ဆက်လက် ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် ပါရမီလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်တွင် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က မ.ထ.သ (၃၉) အထူးယာဉ်မှ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်ရှိ ယာဉ် နောက်လိုက် တစ်ဦး ယာဉ်ပေါ်သို့ ခုန်တက်စဉ် ခြေချော်ကျကာ ၎င်း၏ ဦးခေါင်းကို အဆိုပါယာဉ် ၏ နောက်ဘီးဖြင့် ကြိတ်မိပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း လှိုင်မြို့နယ် ယာဉ်ထ...ိန်းတပ်ဖွဲ့စု (၁၆) ရုံးမှ ယာဉ်ထိန်း အရာရှိ တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်မှ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်သို့ ပြေးဆွဲသော မ.ထ.သ (၃၉) အထူးယာဉ် သည် ပါရမီလမ်းသို့ ကွေ့ကြောမှ ကွေ့ဝင်ကာ ယာဉ်ကို ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့၍ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ပေါ်သို့ ပြန်အတက် ယာဉ်နောက်လိုက်က ယာဉ်ပေါ် ခုန်တက်ရာ ခြေချော် ပြုတ်ကျပြီး ဦးခေါင်း ကို ကြိတ်မိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဘုရင့်နောင် လမ်းမကြီးနှင့် ပါရမီလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်တွင် မ.ထ.သ (၃၉) အထူးယာဉ် အများစုသည် မီးပွိုင့်မိပါက ပါရမီလမ်းအတွင်းသို့ ကွေ့ဝင်ကာ ပါရမီလမ်းအတွင်း ရောက်ပါက ဂငယ်ကွေ့ ပြန်ကွေ့ကာ ဘုရင့်နောင် လမ်းပေါ်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လေ့ရှိကြောင်း အဆိုပါ မီးပွိုင့် တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယာဉ်နောက်လိုက်သည် မောင်းဟု အော်ပြီး ယာဉ်ပေါ်သို့ ခုန်တက် စဉ် ဘောင်းဘီနှင့် တံခါး ငြိကာ တလိမ့်ခေါက်ကွေး ပြုတ်ကျပြီး တက်ကြိတ်ခံ ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အနီးရှိ ကုန်တင် ယာဉ်မောင်း တစ်ဦးက ပြော ကြားသည်။
(၃၉) အထူးယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်မောင်းသည် ယာဉ်ကို ထားကာ ထွက်ပြေး ခဲ့ပြီး ညနေ ၄ နာရီတွင် လှိုင်မြို့နယ် ပိတောက်ချောင်း ရဲစခန်းသို့ လာရောက် အဖမ်းခံခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
2. Sex Boosts Immunity ခုခံအားတက်စေတယ်
Good sexual health ကောင်းမွန်တဲ့ လိင်ကျန်းမာရေးကနေ ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေးကိုပါ တိုးတက်စေတယ်။ တပါတ် ၁-၂ ကြိမ် ဆက်ဆံမှုကနေ Antibody (အင်တီဘော်ဒီ) ခေါ်တဲ့ ခုခံအားမှာ အသုံးကျတာတွေ များလာတာကို တွေ့ရတယ်။ Immunoglobulin A (IgA) လို့ ခေါ်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်ရင် ထွက်လာတယ်။ Wilkes University (ဝေါ်လကီစ်) တက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေကနေ ကျောင်းသူ-ကျောင်းသား ၁၁၂ ယောက်ကို သူတို့ တံတွေး-နမူနာတွေ ယူပြီး စစ်ဆေးတယ်။ လိင်မှုပြုတာ တပါတ်မှာ ၁-၂ ကြိမ်ပြုသူတွေမှာ လုံးဝမလုပ်သူ၊ နည်းနည်းသာပြုသူတွေနဲ့ သိပ်များများ ပြုသူတွေထက် IgA ပိုရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။
3. Sex Burns Calories (ကယ်လိုရီ) ကျစေတယ်
မိနစ် ၃ဝ ကြာ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ ၈၅ (ကယ်လိုရီ) ကုန်စေတယ်။ များတယ် မထင်ရပေမဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ရင် ကယ်လိုရီပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်တယ်။ တနည်းပြောရရင် ကိုယ်အလေးချိန် (၁) ပေါင်ကျစေတယ်။ American Association of Sexuality Educators and Therapists အမေရိကန် လိင်ကျန်းမာရေးပညာရှင် Patti Britton (ပက်တီ-ဘရင်တန်) က ပြောပါတယ် Sex isagreat mode of exercise "(ဆက်စ်) ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်း တခုဖြစ်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းကိုပါ တိုးတက်စေတယ်။"
4. Sex Improves Heart Health နှလုံးကျန်းမာရေး အားပေးတယ်
အစဉ်အလာ ထင်တာတခုက နှလုံးရောဂါသည်ဟာ လိင်ဆက်မှုပြုတဲ့ခါ Stroke (စထုပ်ခ်) ရစေနိုင်မလား စိုးရိမ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Journal of Epidemiology and Community Health က သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဆိုအရ ယောက်ျားပေါင်း ၉၁၄ ယောက်ကို အနှစ် ၂ဝ ကြာလေ့လာမှုအရ အဲလိုမဖြစ်စေတာကို သိရတယ်။ တပါတ်မှာ ၁ ကြိမ် နဲ့ ၂ ကြိမ် ဆက်ဆံမှုပြုသူ ယောက်ျားတွေထဲက တဝက်မှာ Fatal heart attack သေစေနိုင်တဲ့ နှလုံး (အတက်ခ်) ရတာ နည်းကြတာကိုပါ သိလာရတယ်။
5. Sex Boosts Self-Esteem ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးစိတ် ပိုစေတယ်
University of Texas (တက္ကဆပ်စ်) တက္ကသိုလ်က ပြုစုထားတဲ့ လူတွေဘာလို့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုကြသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား ၂၃၇ ပါးထဲမှာ ကိုယ်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးစိတ်ဆိုတာလဲ ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို (ကိန်းဘရစ်ခ်ျ) က ပညာရှင် Gina Ogden (ဂျီနာ-အော်ဒင်) ကလဲ ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်။ သူမပြောတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု ရှိသူတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံတာဟာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ် ရချင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။
6. Sex Improves Intimacy တယောက်နဲ့ တယောက် ပိုပြီးရင်းနှီးစေတယ်
Having sex လိင်ဆက်ဆံကြမယ်၊ Orgasms (အောဂဇင်) လဲ ရမယ်ဆိုရင် Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ဟော်မုန်း ပိုထွက်လာမယ်။ နှစ်ယောက်သား ပိုပြီးခိုင်မြဲတဲ့ စည်းနှောင်မှုကို ရစေမယ်၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာလဲ ကျတယ်။ University of Pittsburgh and the University of North Carolina တက္ကသိုလ် ၂ ခုက ပညာရှင်တွေ သွေးမဆုံးသေးတဲ့ အမျိုးသမီး ၅၉ ဦးကိုလေ့လာရာက အဖြေထုတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ်အဖေါ်အတွက် ရက်ရောမှုပါ ပိုလာကြသေးတယ်။
7. Sex Reduces Pain နာတာကိုသက်သာစေတယ်
Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ဟော်မုန်း များလာနဲ့အတူ Endorphins (အင်ဒိုဖင်) လဲ တက်လာတယ်။ ဒါကနေ နာတာကို သက်သာစေမယ်။ “ခေါင်းကိုက်တာ၊ အဆစ်နာတာ၊ ရာသီမလာခင်နာတာ ဘာလို့နာနာ လိင်ဆက်ဆံပါ” လို့ အကြံပြုတယ်။ Bulletin of Experimental Biology and Medicine မှာ ရေးထားတာတခု ရှိတယ်။ လူ ၄၈ ယောက်ကို Oxytocin vapor အငွေ့ရှူခိုင်းပြီး လက်ထိပ်တွေကို ဆိတ်နည်းနဲ့ အနာခံနိုင်မှုကိုတိုင်းပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
8. Sex Reduces Prostate Cancer Risk ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေတယ်
ငယ်ရွယ်သူတွေ Ejaculations သုက်လွှတ်တာ အကြိမ်များသူတွေမှာ သူတို့ကြီးလာရင် ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ဖြစ်မှာကို နည်းစေနိုင်တယ်လို့ British Journal of Urology International မှာ သြစတြေးလျှ ပညာရှင်တွေကနေ ရေးထားပါတယ်။ ရောဂါရှိပြီးသားလူတွေမှာတော့ ထူးခြားစေမှု မရှိတာတွေ့ရတယ်။ Journal of the American Medical Association မှာလဲ တလမှာ ၂၁ ကြိမ်နဲ့အထက် သုက်လွှတ်ကြ သူတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ ဖြစ်တာ နည်းကြတယ်လို့ ရေးထားတယ်။
9. Sex Strengthens Pelvic Floor Muscles တင်ပါးဆုံတွင်းက ကြွက်သားတွေ အားကောင်းစေတယ်
အမျိုးသမီးတွေမှာ Kegel exercise (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်းလို့ခေါ်တဲ့ Pelvic floor muscle exercises လုပ်ရင် တင်ပါးဆုံတွင်းက ကြွက်သားတွေ၊ အရွတ်တွေ အားကောင်းစေတယ်။ သားအိမ်ကျတာ၊ ဆီးအိမ်ကျတာ၊ အစာဟောင်းအိမ် ကျတာကို မဖြစ်အောင် တားနိုင်တယ်။ ရှိနေရင်လဲ သက်သာစေမယ်။ တကယ်လို့ လိင်ဆက်ဆံနေချိန် အခိုက်အတန့်မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်ရင် စောစောကလို အားကောင်းစေ တာတွေအပြင် သာယာမှုကိုပါ ပိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။
10. Sex Helps You Sleep Better ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ်
Orgasm (အော်ဂဇင်) ရလို့ ထွက်လာတဲ့ Oxytocin (အောက်စီတိုဇင်) ကြောင့် ပိုပြီးအိပ်ပျော်စေတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းဟာ သွေးတိုးကျစေတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းစေတယ်။
ဒီဆေးစာမှာ အကျိုးဘက်ကနေကြည့်တာချည်းသာ ပါတယ်။ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားလို့ မယူဆစေချင်ပါ။ သတိထားစရာတွေ ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တာတွေ၊ ရှောင်သင့်တာတွေ မပါတာ သတိပြုပါ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၁ဝ-၄-၂ဝ၁၂ )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - လိင်နဲ့ ကျန်းမာရေး
လမ်းမီးဓါတ်ကြိုးပြုတ်၍ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကျကာ တက်နင်းမိပြီး ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
၂၉.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၃၀ အချိန် လှည်းကူးမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လှည်းကူးဆေးရုံတွင် လူတစ်ဦးဓါတ်လိုက်၍
သေဆုံးရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းအရသွားရောက်စစ် ဆေးရာ
သေဆုံးသူမှာ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အင်းကြင်းကွင်းရွာနေ ရန်ရှင်း၊ (ဘ)ဦးသောင်းငွေ ဖြစ်ပြီး ကျောပြင်စုတ်ပြဲ၊ ယာခြေဖ၀ါးညိုမဲ၊ ယာလက်ဖျံစုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ
၎င်းသည် ၁၄၀၀ အချိန်တွင် အင်ကြင်းကွင်းရွာလမ်းလယ်တွင်ရှိနေစဉ် ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်သို့ လမ်းမီး ဓါတ်ကြိုးပြုတ်ကျ၍ ကြိုးအားတက်နင်းမိကာ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့် လှည်းကူးမြို့မရဲစခန်း
သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၃) ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာစစ်ဆေး
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်ကို ယခုနှစ်မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီများကို တင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း လက်ရှိပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ် တစ်စီးပေါ်တွင် ခရီးသည်များ လိုက်ပါစီးနင်း လာသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဉာဏ်ဝင်းရှိန်)
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အမြန်ဘတ်စ်ကား လိုင်းစနစ် ပြေးဆွဲခြင်းကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများကို တင်ဒါခေါ်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု များကြောင့် ခရီးသည်များ ဘတ်စ်ကားများ စီးနင်းရာတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စီးနင်းနေရပြီး လမ်းပေါ်တွင်သာ အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးနေရကြောင်း၊ ထို့အတွက် ခရီးသည်များ အချိန်ကုန် သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်ပြေးဆွဲရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စနစ်အတွက် နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနှင့် မ.ထ.သ (ဗဟို)စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
''အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်အတွက် ဒီမှာ အဆင့်မြင့် ကားကြီးတွေရှိတယ်။ အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်မှာ ခရီးသည်တွေ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင် Aircon လည်း ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်စီးခကိုလည်း ခရီးသွားပြည်သူ ၀န်ထိုးဝန်ပိုး မဖြစ်စေမယ့် ကားခနှုန်းထားကို သတ်မှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကားခနှုန်းထား ဖြစ်အောင်လို့လည်း အဲဒီကားတွေအတွက် CNG ရအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ အဲဒီစနစ်ကို လုပ်ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်း တင်ဒါခေါ်မယ်။ သင့်တော်တဲ့ ကုမ္ပဏီရှိရင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသွားမယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့ကတော့ ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုပဲ လုပ်သွားမယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဒီစနစ်ကို စတင်နိုင်အောင်လို့ လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဦးအောင်ခင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်အတွက် မှတ်တိုင်များ သီးခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ မီးပွိုင့်များ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်းမှာ သုံးမိနစ်ခြား တစ်စီး ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ပြည်လမ်းအား ပဏာမ ရွေးချယ်အားပြီး ခရေပင်လမ်းခွဲမှ မြို့ထဲအထိ စတင်ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်လျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
''အမြန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း စနစ်အတွက် ပြည်လမ်းကို ပဏာမရွေးထားတယ်။ ပြည်လမ်းက နည်းနည်ကျယ်တော့ လမ်းဘေးဝဲယာက ပလက်ဖောင်းတွေ အိမ်တွေ ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ဘူး။ အခြားလမ်းတွေ ဆိုရင်တော့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းတွေ၊ အိမ်တွေနဲ့ နီးတော့ ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်တယ်။ စဆွဲမယ့် အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ပိုင်း ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဦးအောင်ခင်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက Cannes မြို့ Carlton ဟော်တယ် ကနေ အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ ကျောက်မျက် ရတနာတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၃ဝ ကျော်တယ်လို့ ပြင်သစ် တောင်ပိုင်းက တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ယူဆ နေကြပါတယ်။
ဒီခိုးမှုဟာ တန်ဖိုးပမာဏ အကြီးမားဆုံး အဖြစ် စံချိန် တင်သွားခဲ့ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးစွပ် ထားတဲ့ တကိုယ်တော် သေနတ်သမားဟာ ဟော်တယ်ထဲကနေ ခြေကျင် ထွက်ခွာသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ခိုးရာပါ ပစ္စည်း တခိျု့ကို လမ်းတလျှောက် ချသွားခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ပထမတုန်းကတော့ အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ ပစ္စည်း တန်ဖိုးကို ဒေါ်လာ သန်းငါးဆယ်လို့ မှန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ခိုးရာပါ ပစ္စည်းတွေကို အသေးစိတ် ကောက်ယူ တွက်ချက် ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခု ခန့်မှန်းချက်သစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ် တုန်းက ဘယ်လဂျီယံ နိုင်ငံ Antwerp Diamond Centre စိန် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စင်တာ လုယက်မှုမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ပမာဏနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အတူတူဘဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအား ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်းများမပို့၍ လိမ်လည်မှုဖြင့် အရေးယူ
၁၇.၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်နေ ဦးအောင်ကျော်ဦး၊ (ဘ)ဦးကျော်လှိုင်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ
M.S MYOUNG SHIN INDUSTRY CO.,Ltd မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ
Mr.YOON ထံ E-mail ဖြင့်ဆက်သွယ်ကာ ပုံနှိပ်စက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား US ဒေါ်လာ ၁၅၅၈၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ ၎င်းပစ္စည်းများအတွက် US ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀၀ အား Mr.YOON လွှဲအပ်ခိုင်းသည့် ဘဏ်သို့လွှဲပေးခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလတွင်
နောက်ဆုံးထားပို့ပေးရန်သဘောတူခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ ပစ္စည်းများအားပို့အပ်ပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် US ဒေါ်လာများ
အားလည်း ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမရှိသဖြင့် ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်
ရောက်ရှိနေ သည့် Mr.YOON အားအရေးယူပေးရန် ဦးအောင်ကျော်ဦးမှတိုင်တန်းခဲ့ရာ ပုဇွန်တောင်မြို့မရဲစခန်း
(ပ)၁၆၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၄၂၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရန်ကုန်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (သန်လျင်) ကျောင်းသူတို့အပေါ် သားသမီးချင်း စာနာသင့်
အင်တာနက် အွန်လိုင်း ပေါ်တင်သူကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းစာသင်ခန်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသူတို့၏ လူမှုရေးအရှက်ရစေသည့် ဗီဒီယိုအခွေနှင့်ပတ်သက်၍ အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် မီဒီယာအချို့တွင် ပျံ့နှံ့စေခဲ့ခြင်းသည် ကျောင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ၎င်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ခံယူကြသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား လုံး၏ကိုယ်စား မခံမရပ်နိုင်ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဖွဲ့က ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် အဆိုပါတက္ကသိုလ် ကျောင်းရှေ့ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုအတွင်း၌ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ရင်ဖွင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း ယခုအခါ ၎င်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ အမျိုးမျိုးပြစ်တင် ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုပါ အထင်အမြင်သေးစွာ သား သမီးချင်းမစာမနာ ဆက်ဆံလာကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသူများမှာ ပို၍ခံစားရသည်ဟု ၎င်းတို့က ပြောပြကြသည်။
နှမချင်းမစာနာသော ယင်းဗီဒီယိုကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရိုက်ကူးကာ အင်တာနက်ပေါ်တင်ခဲ့သူကိုလည်း မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် စုံစမ်းရှာဖွေ၍ တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားကျော်ဇင်ထက်က ပြောသည်။
ထို့ပြင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများ၏ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများကိုလည်း ပိုမိုတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့ကလုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုသည် အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ယခုပုံနှိပ်မီဒီယာ အချို့၌ပင် တွေ့ရှိ လာရသည့်အတွက် ၎င်းတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေကြ သော ကျောင်းသားများအထူးသဖြင့် ကျောင်းသူများအတွက် အလွန်ထိခိုက်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေသည်ဟု ကျောင်းသူ မသန္တာကပြောသည်။
၎င်းကိစ္စကို အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းဂျာနယ်တစ်စောင်က မျက်နှာဖုံးတွင် အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြ ထားခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မီဒီယာများအား တွေ့ဆုံပြောကြားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့သည့် ဂျာနယ်တိုက်သို့ လည်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားထားသည်ဟု ၎င်းတို့ကပြောသည်။
ကျောင်းခန်းအတွင်း လူမှုရေး ကိစ္စကျူးလွန်နေသော ကျောင်း သားနှင့်ကျောင်းသူကို တစ်စုံတစ် ယောက်က မိုဘိုင်းဖုန်းကင်မရာဖြင့် ခိုးရိုက်ကူးကာ အင်တာနက် စာ မျက်နှာများထက်သို့လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ယခုအထက်ပါ ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသူကိုလည်း ၎င်းတက္ကသိုလ် မှထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ဆိုသည်။
ဇူလိုင် ၂၉ ရက် (တနင်္လာနေ့)ထုတ် ရွှေနိုင်ငံသစ်သတင်းစာ၊
" ခရီးလမ်းမပေါ်မှာကြွေလွင့်ခဲ့ရသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ"
၁၈၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ နံနက်ခင်းတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံသား ကား(လ်)ဖရီး ရစ်(ခ်ျ)ဘင့်(ဇ်)၏ဇနီးသည် ဘာသာဘင့်(ဇ်)သည် ဝက်ဂွန် Wagon ကားလေးကိုမောင်း၍ ၆၅ မိုင်ဝေးသော ပီဖိုဇိန်းမြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာပေါ် တွင်မော်တော်ကားကို လူတွေ စတင်စိတ်ဝင်တစားခဲ့လေသည်။ ထိုကားကို စက်မှုအင်ဂျင် နီယာကား(လ်)ဖရီးရစ်(ခ်ျ)ဘင့်(ဇ်) ဆိုသူ ဂျာမနီနိုင်ငံသားက ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ ၁၈၈၆ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂၉ရက် တွင်မှတ်ပုံတင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူဖြင့်ဆွဲရသည့် လန်ချားများပေါ်ပေါက်လာပြီး ၁၉ဝဝပြည့်နှစ်တွင်ကိုယ် ပိုင်မော် တော်ကားများ ပေါ်ပေါက်လာ ပြီဟု ဆိုပါသည်။ ၁၉ဝ၆ ခုနှစ်တွင်
၁၉၃၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် က ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် ၁၉ နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေ့ လည်းဖြစ်ရာ စာရေးဆရာကြီး ပီမိုးနင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိမြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်သို့ တိုက်သားဟောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့လေသည်။ အလှူရှင်က သတင်းစာတိုက် ဝန်ထမ်းများအား တစ်ဦးလျှင်ကျပ် ၂ဝ စီ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ဆရာကြီးပီမိုးနင်းသည် ဘုရင်မပန်းခြံ(ယခု မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ)ဘေးဆူးလေဘုရားလမ်း အတိုင်းလျှောက်လာစဉ် အချုပ်ထောင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက နောက်မှ စက်ဘီးဖြင့် အရှိန်ပြင်းစွာဝင် တိုက်မိလေသည်။ ဆရာကြီးမှာ လဲကျသွားပြီးဒူးအပေါ်ပိုင်း အရိုးကျိုးသွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသရင်း ဆီးချိုရောဂါအခံကြောင့် ခြင်ဆီကိုထိခိုက်သွားပြီး ခြေထောက်ဖြတ်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် ၁၉၄ဝပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်၌ ကွယ်လွန်သွားရှာပါသည်။
ပင်ဖြစ်လေသည်။ ဆရာမြို့မငြိမ်းသည် ၁၉ဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ရာ ကွယ်လွန်ချိန် တွင် အသက် ၄၆ နှစ်ကျော် ၄၇ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည့် အတွက်
ဆရာမြို့မငြိမ်းသည် ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့မတူရိယာ အဖွဲ့ကိုဦးထော်လုံဆိုသူက တည်ထောင်စဉ်ကပင်
နာမည်ကျော် အဆိုတော်များထဲတွင်လည်း ကိုကျော်ရှိန်၊ ကိုသက်ဦး၊ ကိုလွှမ်းမိုးတို့မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသလို နာမည်ကျော် စာရေးဆရာများထဲတွင်လည်း ဖိုးကျော်မြင့်၊မောင်လွန်းကြင်တို့ သည်လည်းယာဉ်မတော်တဆမှု ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။ အနုပညာရှင်များနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၁၂ ပွဲခေါ် ဘုရားပွဲများတွင် လှည့်လည်ကပြကြရသော ဇာတ်ပွဲများရှိခဲ့ရာ ထိုဇာတ်သဘင်ပညာရှင်များမှာလည်း တစ်မြို့မှတစ်မြို့အကူးတွင် ဇာတ်ကား မှောက်၍ သေဆုံးခဲ့ကြသဖြင့် ဇာတ်ပါပျက်သွားရသောအဖွဲ့
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်(ဦး)မောင်မောင်မြင့်၏ သားဖြစ်သူ မင်းသားကို ပြေငြိမ်းမှာလည်း ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့အသွား တောင်ငူမြို့အနီး ခပေါင်းတံတားပေါ် ရထားအရောက်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ကိုပြေငြိမ်းမှာရုပ်ရှင်လောကတွင် အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားနေချိန်လည်းဖြစ်၍ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်များ အကြားဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
လူ၁ဝဦးသေဆုံးနေပြီးလူ ၅ဝ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေ ကြောင်း သိရပါသည်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပြောပြချက် အရ သိရပြန်သည်။
တလောက မိတ်ဆွေတစ် ဦးကခရီးတစ်ခုကိုအမြန်ရောက် ချင်ပေမယ့် သေမင်းဆီကိုတော့ အရောက် မမြန်ချင်ကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးထား တာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ဟုတ်ပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့ အမြန် လမ်းမကြီးကဖြင့် အမြန်ရောက် ချင်သူများကိုလိုရာခရီး မရောက် စေဘဲ အရောက်မမြန်ချင် သည့် သေလမ်းသို့ အရောက်ပို့နေ သည်ကလည်း အသေအချာပင် ဖြစ်ပါ သည်။အမြန်လမ်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဝမ်းနည်း ကြေ ကွဲမှုတွေကလည်းမနည်းလှ။မေး ခွန်းထုတ်စရာများကလည်း အန မတဂ္ဂဖြစ်လို့နေသည်။
လူတွေသေဆုံးမှု ကိုကြည့်လျှင်လည်း ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် က ၄၇ဦး၊ ၂ဝ၁ဝတွင် ၃၈ ဦး၊ ၂ဝ၁၁တွင် ၄၇ဦး၊၂ဝ၁၂တွင်၅၄ဦး ရှိခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်တွင်လည်း မေ လ ၂၅ ရက်ကမန်းရွှေမြို့တော် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ ၁၂ဦး သေဆုံးပြီး အမြန်လမ်းမ ပေါ်၌တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အများ ဆုံးသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် အန္တရာယ်ကင်းစင်ရေး အထူးပြုအချပ်ပိုမှ )
၁။ကျွန်တော်တို့တွေ အခုခေါ်ခေါ်နေတဲ့ Facebook ကိုယခင်တုန်းက
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ တွေရဲ့  ကိုယ်ရေးအချက်
အလက်တွေနဲ့ မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်သာ အသုံးပြုဖို့သာဖြစ်တယ်
လို့ဆိုတယ်၊၂၀၀၅ ခုနှစ်ရောက်မှ ကျွန်တော်တို့တွေခေါ်နေကျအသံ
၂။ဟားဗက်မှာအသုံးပြုတဲ့ thefacebook ကိုလူတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်
အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Zuckerburg ကလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်
စိတ်ကူးနဲ့အကြံဥာဏ်တွေကို ကူးချတယ်လို့ဆိုပြီး Facebook ကို အပိတ်ခံ
"အင်း....တကယ်လို့အပိတ်သာခံခဲ့ လို့က တော့ အခုလောက်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့တွေ တွယ်တာလို့ခေါ်တဲ့ Twitter,LikeIn တို့နဲ့နှစ်ပါးသွား
၃။Facebook ကိုအခြေခံပြီးတော့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Social Network
ရုပ်ရှင်ကား Golden Globes ဆုလေးဆုတောင်ရခဲ့တယ်ဆိုပဲ။အဲဒီကားထဲ
မှာဆိုရင် Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေ တရားရင်
ဆိုင်ရပြီး အပိတ်ခံရလုနီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ စုံစုံလင်လင်ပါတယ်လို့
ကြည့်ဖူးတဲ့ သူတိုင်းကတော့ ပြောကြတာပဲ။
"ကျွန်တော်ကတော့ မကြည့်ဖူးသေးဘူး အသံဖမ်းတရားနာလုပ်ထားတာ...
၄။မြန်မာပြည်မှာ Facebook ကိုတစ်လ မိနစ်ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာ
တော့သိဘူး...တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့ မိနစ် ၇၀၀ တောင်သုံးကြတယ်
၅။နိုင်ငံတကာမှာ Facebook ကြောင့်မို့လို့ ရာဇဝတ်မှုများစွာကိုတောင်
"မြန်မာပြည်မှာ Facebook နဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့တော့
၆။Facebook ကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသူ ၁ ဘီလီယံတောင်ရှိတယ်
ဆိုပဲ၊ကျွန်တော်တို့လို နေ့စဉ် Facebook မှာရေးနေရတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာ
၇။လူဦးရေ သန်း ၆၀၀ လောက်က Facebook ကိုဖုန်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့။
"သူတို့များ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းလို့ထင်ပါရဲ့ "
၈။အမေရိကန်မှာ Facebook ကိုလူဦးရေ ၁၆၆ သန်းကအသုံးပြုပြီး
"အင်း....သိပ်တော့လည်း မထူးဆန်းပါဘူး...သူတို့ဆီမှာက လူဦးရေကများ
တာကိုး....မြန်မာပြည်မှာတောင် သုံးတဲ့သူ ၇ သိန်းလောက်ရှိသေးတာပဲ..
၉။အဲ......ဖွဘွတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကိုတောင်ကျော်ပြီး
ဦးဆောင်နေပြီတဲ့ဗျ၊အမျိုးသမီးတွေက ပျမ်းမျှတစ်လကို Status Update
၂၁ ကြိမ်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသားတွေက ပျမ်းမျှ ၆ ကြိမ်သာရှိတဲ့။
"မီးနှုတ်ခမ်းနီးချိုးတာ လှရားဟင်....ဒီနေ့ ချော့ပင်ထွက်တယ်....."
ထွက်ပဲထွက်နိုင်လွန်းတဲ့ ချော့ပင်...Status Update မှာတွေ့နေရတာတွေကို
၁၀။ပြောလို့မဆုံးသေးဘူး Facebook မှာ Photo Uploaded ပေါင်း
သန်း ၂၅၀ တောင်ရှိတယ်တဲ့၊အဲဒါက နေ့စဉ်တဲ့နော်...နေ့စဉ်..
ဒီလိုဆိုရင် မနည်းဘူးပဲ.....တင်လိုက်တဲ့ Photo တွေ...
၁၁။အမေရိကန်မှာ အွန်းလိုင်းအရောင်းအဝယ်တွေကို ဖွဘွတ်နဲ့အသုံးပြု
တာက ၉၅%ရှိပြီး တွယ်တာနဲ့က ၆၂% ပဲရှိတယ်တဲ့....
လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုလို့ရနေတဲ့ Facebook ကိုတရုတ်၊ဗီယမ်နမ်၊အီရန်
" မြန်မာပြည်မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ အတော်လေးကိုပျော်နေလို့ မဖြစ်
ပိတ်မယ်လို့တော့ သဲ့သဲ့ လေးကြားနေရတယ်ဗျ..."ဒါကလည်း ဖြစ်သင့်
တယ်ပဲဆိုရမှာလားပဲ...အဲလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တော့ ငှက်ပီ....
၁၃။ဘီလီယံ ၈၀ တောင်တန်တယ်တဲ့....လက်ရှိ Facebook ရဲ့ တန်ဖိုးက
"ကယ်.....မှုပိုင်ဝယ်ချင်တဲ့ သူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့
၁၄။အလုပ်အရှုပ်ဆုံး ဝက်ဆိုဒ်အဖြစ် Google ပြီးရင် ဒုတိယနေရာမှာ
"မြန်မာပြည်မှာတော့ လာမယှဉ်နဲ့ ဖွဘွတ်ကအလုပ်ရှုပ်ဆုံးပဲ...."
၁၅။ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖဲသမားတွေ၊လောင်းကစားသမားတွေ အများဆုံးဆိုတာ
Facebook ကငြင်းလို့မရအောင် သက်သေပြနေပြီ၊ဘာလို့လည်းဆိုတော့
Texas Hold’em Poker လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းအမျိုးစားက Fan page အဖွဲ့ဝင်
သန်း ၇၀ ကြီးများတောင်ရှိတယ်တဲ့.....
Fan Page အဖွဲ့ဝင်အများဆုံးပေါ့ ဗျာ.......
၁၆။အောင်မငီး....အိုင်စလန်နိုင်ငံရဲ့  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့
Facebook ကိုအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်.....
၁၇။Facebook ရဲ့  URL အဆုံးသတ်မှာ အင်္ဂလိပ်အမှတ်စဉ်(4)ကိုပါရိုက်ထည့်
မယ်ဆိုရင် တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ရဲ့  Wall Page ကို
၁၈။ဒါကတော့ ကြေငြာချက်ဗျ..Facebook ကအသုံးပြုသူကိုယ်ရေးအချက်
အလက်တွေကို Hack နိုင်ရင် အကောင့်တစ်ခုအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀
" အဲ....ခုမှသတိရတယ် မင်းသမီးအကောင့်တွေ အဟက်ခံရတယ်လို့ ဟိုတစ်
ကယ်....ဒါတွေကတော့ ဖွဘွတ်နဲ့သိမှတ်ရသလောက် ဝေငှထားတာပါ...
မျက်လုံးမှာ ဆင်ဆာစနစ်တပ်ပြီး ပြင်ဖတ်ပေးပေါ့ဗျာ....
ခွန်နေ(August Myanmar Media Group)
၂၈.၇.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၅၀၀အချိန် ဦးကျော်မင်း၊ အောင်တော်မူဆုတောင်း
ပြည့်ဘုရား ဂေါပကဥက္ကဌ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်နေသူသည် ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊
ဗိုလ်တေဇလမ်းနှင့် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းထိပ်ရှိ အောင်တော်မူဆုတောင်းပြည့်
ရေးမှူးအဖွဲ့ နှင့်အတူစစ်ဆေးရှာဖွေရာ၎င်းမှာ ဇော်ထက်အောင်၊(ဘ)ဦးထွန်း
အားတွေ့ရှိသောကြောင့် အရေးယူပေးပါရန်တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ဗဟန်းမြို့မ
ရဲစခန်း(ပ) ၂၉၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၇၉ ဖြင့်အမှုဖွင့်လှစ်ကာ ဖမ်းဆီးအရေး
သေဆုံးသူ မိသားစုများက ဖြောင့်ကွယ် ကွယ်ခဲ့ပေမယ့်၊ တာဝန်သိ ပြည်သူများကြောင့် အမှုမှန်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လူသေမှု
၂၈၊၇၊၁၃ရက်နေ့က ကသာမြို့နယ်၊ နမ့်စမ်းကျေးရွာ သုဿန် အတွင်းရှိ လွန်ခဲ့သော(၂)လမှ မြုတ်နှံထားခဲ့သော လူသေအလောင်းအား ပြန်လှယ်တူးဖေါ် စစ်ဆေးမှုကို ဒုတိယ တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်မာဦး၊ ဒေါက်တာ ပြည့်ကျော်နှင့် ကသာမြို့နယ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမြင့်လွင်တို့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးချက်အရ ၂၈၊၅၊၂၀၁၃ရက်နေ့က သေဆုံးခဲ့သော ဦးကျော်အေး(၅၉)နှစ်မှာ ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဦးခေါင်း နောက်ဘက်တွင် ကွဲအက်ဒါဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ၂၈၊၅၊၂၀၁၃ရက်နေ့နံနက်(၈)နာရီအချိန်က ကသာမြို့နယ်အပိုင် ၊ မှတ်တိုင်အုပ်စု၊ နမ့်စမ်ရွာနေ ဦးကျော်အေးသည် နေအိမ်အတွင်း အရက်မူး၍ လဲကျသေဆုံး ခဲ့ပါသည်။
ထိုသေဆုံးမှုကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းလွင်နှင့် ရွာလူကြီးများသည် အပိုင်ရဲစခန်းမှူး ဒုရဲအုပ်ထွန်းထွန်းလွင်ထံသို့ သတင်းပို့ခဲ့ရာ သေဆုံးသူ မိသားစုမှ ကျေနပ်မှုရှိလျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတွင် အမှုမလုပ်လိုကြောင်း ၀န်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုး၍ ရဲစခန်းသို့ အကြောင်းပြန်ကြားရန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
မိသားစုနှင့် ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖများက ဦးကျော်အေး သေဆုံးရခြင်းသည် ပယောဂကြောင့် သေဆုံးခြင်း မဟုတ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သောစာကို စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ်ထွန်းထွန်းလွင်ထံ ပို့ပေးခဲ့ကြပြီး ထိုနေ့ညနေ (၅)နာရီအချိန်တွင် အလောင်းကို ကျေးရွာရှိ သုဿန်အတွင်း မြုတ်နှံလိုက်ကြပါသည်။
၁၅၊၆၊၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် ထိုသေဆုံးမှုသည် သွေးရိုးသားရိုး သေဆုံးမှု မဟုတ်ကြောင်း ၊ ဓါးဒါဏ်ရာ(၂)ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသတင်းကို သေဆုံးသူ ဦးကျော်အေး ၏သား ကိုဖိုးဝယ်(၃၅/၁၃)နှစ်မှ ရွာထဲတွင် ပြောဆိုနေကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသည့် ရွာသားတစ်ဦးမှ ကသာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူး ကျော်အောင်မြင့်ထံ ဖုန်းဆက် အသိပေး တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုတိုင်ကြားမှုမှာ တိုင်ကြားသူ အမည်မဖေါ်ခဲ့သော်လည်း ရဲမှူးကျော်အောင်မြင့်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးစေ ခဲ့ပါသည်၊ ဇူလိုင်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်မှူးထံ ဒုတိယတိုင်စာရောက်ရှိလာပြီး တိုင်တန်းသူ အမည်ပါ ပါရှိလာသဖြင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံ တင်ပြသတင်းပို့၍ လမ်းညွန်မှု ခံယူခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ စာအမှတ် ၁၀၃၉(၀၁)/၂၀၄ဖြင့် စာထွက်ပြီး ယခင်ဖွဲ့ပေးထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့အထိ စုံစမ်းတွေ့ရှိရမှု ပြန်လှယ်မတင်ပြသောကြောင့် ကသာမြို့နယ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမြင့်လွင်နှင့် အရာရှိ(၃)ဦးပါသော စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သစ်ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့အဖွဲ့ကို မြို့နယ်မှူးမှ လူတွေ့ခေါ်ယူခါ (၇)ရက်အတွင်း ဖေါ်ထုတ် တွေ့ရှိချက်များကို ပြန်တင်ရန်နှင့် ချက်ချင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်မှု ပြုလုပ်ရန် ညွန်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုအဖွဲ့မှ သေဆုံးသူ ဦးကျော်အေး၏သားငယ် ကိုဖိုးဝယ်(ခ)ကိုဝင်းမြင့်ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ ၂၈၊၅၊၂၀၁၃ရက်နေ့ မနက်က ညီမဖြစ်သူ မရွှေမြင့်မှ အဖေ ထမင်းလာမစားကြောင်း ပြောဆိုမှုအရ ဖခင်၏နေအိမ်သို့ သွားကြည့်ရာ နေအိမ်ပြူတင်းပေါက်အနီး လဲကျသေဆုံးနေသော ဖခင်၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဖခင်၏ ကိုယ်ခန္ဒာပေါ်တွင် ဒါဏ်ရာရှိ မရှိ ကြည့်ရှု့ရာ နောက်စေ့တွင် လက်သန်းခန့် ပေါက်နေသော ဒါဏ်ရာတွေ့ရပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလည်း သွေးကွက်များတွေ့ရကြောင်းနှင့် သေဆုံးပြီး ရက်(၂၀) အကြာမှာ ယောက်ဖဖြစ်သူ မြင့်ထွန်းက လုပ်ကြံတာဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာကြောင်း၊ထိုသို့ ကြားရသော သတင်းကို ညီမဖြစ်သူ မရွှေမြင့်ကို မပြောခဲ့မိကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။
သေဆုံးသူ ဦးကျော်အေး၏ သမီးဖြစ်သူ မရွှေမြင့်(ခ) မယ်သီကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ၂၈၊၅၊၂၀၁၃ရက်နေ့ မနက်က အရက်အလွန် သောက်လေ့ရှိသူ ဖခင်ဦးကျော်အေး ထမင်းလာ မစားသဖြင့် အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုဖိုးဝယ်အား ဖခင်ဖြစ်သူ၏ နေအိမ်သို့ သွားကြည့်ရန်ပြောပြီး မိမိမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မြင့်ထွန်းရှိရာ ကြံခင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြောင်း ရွာအရောက်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်အေးအမူးလွန်၍ လဲကျသေဆုံးကြောင်း ကြားရပြီး ဖခင်၏ အိမ်သို့ လိုက်သွားရာ အလောင်းပြင်ထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ဖခင်သေဆုံးမှုမှာ ရာသီဥတု ပူသဖြင့် သွေးတိုးပြီး လဲကျသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ထင်မိခဲ့ကြောင်း၊ တစ်စုံတစ်ဦး၏ ပယောဂကြောင့် သေဆုံးသည်ဆိုသော ပြောဆိုသံ မကြားခဲ့ရကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။
ထိုအမှုတွင် အဓိကကျသော မရွှေမြင့်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မြင့်ထွန်းအား စစ်ကြောရေး ပြုလုပ်ရာ မိမိသည် ၂၈၊၅၊၂၀၁၃ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းက ကြံခင်းအတွက် ငွေလိုနေသဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူ မရွှေမြင့်ထံ ငွေထုတ်ရန် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ အိမ်တွင် မရွှေမြင့်ကို မတွေ့ရသဖြင့် ယောက္ခမဦးကျော်အေး၏နေအိမ်သို့ သွားသည် ထင်ပြီး သွားရှာခဲ့ကြောင်း၊ ယောက္ခမဦးကျော်အေး၏ နေအိမ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ရှိမနေသဖြင့် လှည့်ပြန်ရန်ပြုလုပ်စဉ် ယောက္ခမဦးကျော်အေးမှ အရက် အလွန်မူးနေပြီး မိမိအား ရိုက်နှက်ရန်ရှာသောကြောင့် ယောက္ခမဦးကျော်အေး၏ ရင်ဘတ်ကို လက်ဖြင့် တွန်းလိုက်မိကြောင်း၊ယောက္ခမဦးကျော်အေး နောက်ပြန်လဲသွားသည်ကို တွေ့ရပြီး မိမိလည်း ကြံခင်းထဲသို့ ပြန်လာပြီး အလုပ်လုပ်နေကြောင်း၊ ညနေ ကြံခင်းမှ ပြန်လာသောအခါမှ ယောက္ခမ ဦးကျော်အေး သေဆုံးသည်ကို သိရကြောင်း မိမိပယောဂကြောင့် သေသည်ဟု မထင်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်သက်၍ ကျေးရွာခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်မှ ၁၄၊၇၊၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် ကသာရဲစခန်းသို့ တိုင်ချက်ရေးသွင်းပြီး ကသာရဲစခန်းမှ(ပ)၂၂၀/၁၃အရ တရားခံ မြင့်ထွန်းအပေါ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၄(က)အရ အမှုဖွင့် အရေးယူလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိ ရပါသည်။